Short Nyaya: Make up sviro after ndahurirwa nemukadzi – Vanoda Zvinhu
Short Nyaya: Make up sviro after ndahurirwa nemukadzi
· Updated July 17, 2015
So 3months ago caught my wife cheating and she said it was revenge and I wasn’t giving her what she wanted esp kumudya beche.
Manje its not into me zvekudya gambi but I regret now ndakavhura her phone and saw a chat aitaura ne this other guy about how she had enjoyed kudyiwa beche nekukwirwa kwaakanga aita but I don’t know kuti why akasiya ma txt aya kuda kundirwadzisa well ndakarwadziwa.
I asked her and akabvuma kuti she was dating this guy aimupa pleasure shuwa munhu wandakabvisira mari kunokwirwa ne umwe murume so I beat her out of anger then she decided kuti we were gonna sleep in separate bedrooms like roommates munhu wese woita yaada until we divorce and sell the house so we did.
Ini I started bringing vasikana for sleep overs vakanaka kupfura mukadzi wangu but she didn’t seem to bother she would actually talk to them vachitoseka and iye aiuya ne murume waaidanana naye and I could hear vachitamba nekukwirana achichemerera the whole nyt and I pissed me off so one day ndakanodongorera and I saw mukadzi wangu achidyiwa beche rese and I realised I had made a mistake.
Paakazoona handichaunze vaskana she did the same so one day I was sleeping naked as always it was hot and mboro yangu yaimira ndakarara.I was so tired ndanyatsorara in a deep sleep ndakanzwa mboro yangu ichiyamwiwa I thot I was dreaming ohhhh it was good ndakaita zvekuvhunduka ndakunzwa kuda kutunda then saw my wife achindiyamwa ndiye.
I asked her watsup she just said shiii then continued kusvika ndatunda then she came musheet pamubhedha and I started kissing her evry part of the body kusvika pabeche chaipo I sucked it ndichidhonza matinji ne rurimi ndichiita kunge ndikumusvira naro.
U know what it wasn’t even bad I liked it if I should have done it early ndabvandakwidza kuzamu ndigoriyamwa zvakasimba until she came ndabva ndaipinza mboro tiri pa missionary ndakamusvira zvekuti akabvuma kuti baba ndini and ndaive nehasha dzekunzwa achikwirwa ne mumwe and she did the same auya pamusoro akandikwira kunge bhiza hameno ndakatunda kangani we fuked the whole nite.
In the morning she made breakfast and ironed for me zvataingoita pataidanana and we talked normal and I kissed her ndakubuda I came home and dinner was ready manheru she came netunhu twake mu main bedroom and arara neni now mborto ikumira and ndakuda kutopamha futi!
Uri iwe waiita sei?
· Last modified September 22, 2013 0
· Last modified August 21, 2015 0
Ndakaribhilivhisa ndokurisvira zvemhando Zibabe Musoja
Next story A day to remember. Inzwa kuzokurirwa nemiyedzo kwandakaita teaching pa Private College
Previous story How I ended up ndakukovhonga stepsister